नेपाली रेल जनकपुर आउँदै, हेर्नेको थामिनसक्नु भीड (हेर्नुहोस् लाईभ भिडियो) -
Homeभिडियोनेपाली रेल जनकपुर आउँदै, हेर्नेको थामिनसक्नु भीड (हेर्नुहोस् लाईभ भिडियो)
नेपाली रेल जनकपुर आउँदै, हेर्नेको थामिनसक्नु भीड (हेर्नुहोस् लाईभ भिडियो)
September 18, 2020 admin भिडियो, समाचार 7796
भारतको जयनगरबाट नेपालका लागि प्रस्थान गरेको नेपाली रेलगाडी आज दिउसो जनकपुर आइपुग्ने भएको छ । भारतको हाजिपुर रेल्वे स्टेशनबाट जयनगर हुँदै जनकपुर तर्फ सो रेल आइ’रहेको नेपाल रेल विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रले जनाएका छन् ।
२ वटा रेलगाडि नेपाल’को झण्डा’मा प्रयोग हुने निलो र रातो रंगलको रहेको छ । १ इन्जिन र ४ वटा बोगी’सहितको रेल जनकपुर आए’पछि आजै नेपाल’लाई हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।
विभागका महानि’र्देशक मिश्रले रेलको फोटो आफ्नो फेसबुकमार्फत सार्व’जनिक गरेका छन् । फो’टोमा नेपाली रेल आकर्षक देखिएको छ । छिट्टै रेल सञ्चा’लन गर्ने तयारी गरेको विभागले आ’वश्यक कर्मचारीका लागि विज्ञापन समेत खु’लाएको छ ।
December 24, 2020 admin समाचार 2569
December 14, 2020 admin समाचार 3221
March 25, 2021 admin समाचार 862
सुतेर पनि इम्युनिटी पावर बढाउन सकिने यस्तो छ जन’स्वास्थ्य विज्ञ डा. पाण्डेको सुझाव (165437)
भाण्टा खाँदा हुने १३ फाइदा’हरु (159957)
विवाहित महिलाले किन सिउँदोमा सिन्दुर लगाउँछन् , जान्नुहोस रहस्य.. (159461)
कपालमा चाँया परेर हैरान हुनुहुन्छ ? यी हुन् चाँया हटाउने घरेलु उपाय… (158911)
छोटो समयमै छिटो कपाल बढाउने तरीका यस्तो छ: थाहा पाहुनुहोस् (158496)
सुशान्त केश’ले लियाे नयाँ मोड, रियाको भाइको ‘गोप्य च्याट’ बाहिरियो…हेर्नुहोस् (156484)
यसरी बनाउनुहाेस्: मात्र केही समयमानै तपाईंको पहेलो दाँत चम्किलो … (156358)
चर्चित हाँस्यकलाकार तथा समाजसेवी धुर्मुसको जन्मदिन आज, कति वर्ष लागे उनी ? थाहा पाउनुहोस् (154693)
लियोनेल मेसी बने विश्वको सबैभन्दा बढी कमाउने फुटबलर, कति कमाए त उनले ? थाहा पाउनुहोस् (150062)